Call of Duty:Mobile weapons Full list • TECH CORNER
Call of Duty:Mobile weapons Full list
Call of duty mobile game ရဲ့ Weapons တွေစာရင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
Call of duty :Mobile game ဟာ ထွက်ရှိပြီး ခဏလေးအတွင်းမှာပဲ Download ပြုလုပ်သူ 20 millions ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ Mobile gamers တွေကြားမှာ အရမ်းကို hot နေတဲ့ game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း PUBG Mobile တောင်မဆော့ဖြစ်ပဲ Call of duty ပဲ ဆော့ဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ အခု ဘော်ဒါတွေအတွက် COD မှာပါဝင်တဲ့ Primary Weapons, Secondary weapons, grenades တွေနဲ့ ရင်းနှီးမှူ ရှိအောင် weapons တွေရဲ့ list ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1.Primary Weapons with perks(special features)
special features တွေပါဝင်တဲ့ အဓိက လက်နက်များ
*ပုံရဲ့အောက်မှာ list ထဲက အဓိပ္ပါယ်တွေ ဖော်ပြထားပါတယ်။*
Damage – ပြင်းအား
Fire Rate – ပစ်ခတ်မှူနှူန်း
Accuracy – တိကျမှူ
Mobility – သယ်ယူနိုင်မှူ
Range – အကွာအဝေး
Radius – ပေါက်ကွဲနိုင်သည့် အကျယ်အဝန်း
(နားလည်လွယ်အောင် ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တချို့အရာတွေက English လိုပဲ မှတ်ထားလိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။) 😁
2.Standard Primary Weapons
(special features မပါဝင်သော လက်နက်များ)
Close up တွေ ၊ မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်ခိုက်ရာတွေမှာ အနီးကပ်အသုံးပြုနိုင်သော လက်နက်များ
Grenades တွေကတော့ လောလောဆယ်မှာ ၃ မျိုးပဲ ရှိပါသေးတယ်။
Source : PocketGamer
Photo from Pocketgamer
Call of duty :Mobile game ဟာ ထြက္ရွိၿပီး ခဏေလးအတြင္းမွာပဲ Download ျပဳလုပ္သူ 20 millions ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Mobile gamers ေတြၾကားမွာ အရမ္းကို hot ေနတဲ့ game တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လဲ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း PUBG Mobile ေတာင္မေဆာ့ျဖစ္ပဲ Call of duty ပဲ ေဆာ့ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါနဲ႔ အခု ေဘာ္ဒါေတြအတြက္ COD မွာပါဝင္တဲ့ Primary Weapons, Secondary weapons, grenades ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးမႉ ရွိေအာင္ weapons ေတြရဲ့ list ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
Photo from Call of duty mobile
special features ေတြပါဝင္တဲ့ အဓိက လက္နက္မ်ား
ပုံရဲ့ေအာက္မွာ list ထဲက အဓိပၸါယ္ေတြ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
Damage – ျပင္းအား
Fire Rate – ပစ္ခတ္မႉႏႉန္း
Accuracy – တိက်မႉ
Mobility – သယ္ယူနိုင္မႉ
Range – အကြာအေဝး
Radius – ေပါက္ကြဲနိုင္သည့္ အက်ယ္အဝန္း
(နားလည္လြယ္ေအာင္ ေရးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အရာေတြက English လိုပဲ မွတ္ထားလိုက္တာ ပိုေကာင္းပါတယ္။) 😁
(special features မပါဝင္ေသာ လက္နက္မ်ား)
Close up ေတြ ၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တိုက္ခိုက္ရာေတြမွာအနီးကပ္ အသုံးျပဳနိုင္ေသာ လက္နက္မ်ား
Grenades ေတြကေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာ ၃ မ်ိဳးပဲ ရွိပါေသးတယ္။
I'm justamariner andanerdy tech guy who hasadeep passion of tech. I've beenatech writer for almost five years and I founded this website. My only mission is to provide all about tech in all aspects of technology fields.
Racing Game Fans တွေအတွက် iOS နဲ့ Android ပေါ်ကို ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Forza Street
Share via:0Shares0Forza Street ဆိုတဲ့ game ဟာ 2019 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး Microsoft Xbox
နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေအထိ ဆက်လက်ပါဝင်ခွင့်ရမဲ့ PUBG Mobile ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပ
Share via:0Shares0PUBG MOBILE Myanmar Championship 2020 Spring Split ပြိုင်ပွဲ၏ Online Registration
2010-2019 ခုနှစ်အတွင်း ဂိမ်းကစားသူတွေ ငွေအများဆုံး သုံးစွဲခဲ့တဲ့ Mobile Games ၁၀ ခု
Share via:0Shares02010 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကတည်းက စတင်ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Mobile Phone games တွေဟာ ဆိုရင် အခု 2019/2020
League of Legends and Teamfight Tactics both coming to mobile next year
Share via:0Shares0Mobile နဲ့ console တွေအတွက် ထွက်ရှိလာတော့မဲ့ League of legends #Unicode League
Facebook တွင် Follow လုပ်ရန် နှိပ်ပါ။
Follow us on Facebook 63K Followers
Why do we buy expensive iPhone? (33,138)
iPhone X vs iPhone 11 Pro Should You Upgrade (25,746)
An App that can access MIUI Hidden setting (19,922)
What is HTC Doing Now? (16,858)
AMOLED Display နှင့် LCD Display တို့၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ (16,620)
iPhone တစ်လုံးကို ပြုလုပ်ဖို့ ဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ? (15,955)